काठमाडौं । एक ट्याब्लोइड साप्ताहिक पत्रिकामा नायक राजेश हमालकी प्रेमिकाको अन्तर्वार्ता छापिएको एक हप्तापछि फोटो नै सार्वजनिक भएको छ । हमालले लामो समयदेखि आफ्नी प्रेमिकाको बारेमा सबै कुरा रहस्यमै राख्दै आएका थिए ।
विभिन्न अनलाइनले एक्सक्लुसिभ भन्दै हमालकी प्रेमिकाको तस्वीर सार्वजनिक गरेपनि यसबारेमा हमालले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सार्वजनिक भएको तस्वीर हमालकी प्रेमिका मधु भट्टराईको भएनभएको स्वतन्त्र पुष्टि हुन भने सकेको छैन ।
हमालले झण्डै दुई वर्षअघि एक युवतीसँग आफू प्रेममा परेकेा सार्वजनिक गरेका थिए । तर युवतीको परिचय सधैं लुकाइरहे, उनले । मधुको स्केचसहितको अन्तर्वार्ताछापिएपछि ती युवती को हुन् भन्ने विभिन्न अड्कलबाजी भएको थियो । यही क्रममा साइबर सन्सारले खिचेको मोडल मधु भट्टराईको तस्वीर नै हमालको प्रेमिका भनेर सार्वजनिक भएको हो ।
यसअघि समेत हमालको प्रेमिका भन्दै विभिन्न व्यक्तिले मिडियाबाजी गरेका थिए । चितवनकी एक महिलाले बच्चासहित हमालकी श्रीमति भएको दाबी गर्दा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंसम्म पुग्नुपरेको थियो, हमाल । त्यसपछि समेत हमालकी एकजना फ्यानले आफू हमालसँग विवाह गर्न क्रेजी भएको सार्वजनिक गरेकी थिइन् । आखिर सार्वजनिक तस्वीर हमालकी प्रेमिकाकै हो ? हमाल किन मौन ?
harish bohara भन्नुहुन्छ:
hamal dai chittai marrage gar kati luker basne
paru budhathoki भन्नुहुन्छ:
happy loving life aba chadai married ko khabar sunna paiyos god bless you.
Dipendra BiBas भन्नुहुन्छ:
संसार सानो छ राजेश दाई जहा चाहेर पनी लुक्न अनी लुकाउन सकिदैन। मलाई लाग्छ तपाई पनि त्यसको सिकार बन्नुभयो। तर केही छैन यदि तपाईले साँच्चीकै मधुजी लाई प्रेम गर्नु भएको हो भने तपाईहरूको प्रेम सफल फलोस्‌ फुलोस्‌ मेरो शुभकामना
dibesh kafle भन्नुहुन्छ:
good varry good ok
binod premi subba भन्नुहुन्छ:
hamala sir ko goolfen man paryo yadi lamo samaya samha kasae lae dha nahunu ma